Guddoomiye Mursal Oo Gaaray Jordan+Ujeedka? – Bandhiga
Guddoomiye Mursal Oo Gaaray Jordan+Ujeedka?
Guddoomiyaha gollaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Jordon, waxaana safarkani uu kamid yahay safarrada guddoomiyuhu uu howlaha shaqo ugu aado dalka dibaddiisa.
Garoonka Diyaaradaha ee caasimadda dalkaasi Jordan waxaa ku soo dhaweyey guddoomiye kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka Jordan Dr.Nasar Alqeysi iyo xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka wadankaasi Jordan.
Mudane Maxamed Mursal Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Wafdigiisa ayaa la filayaa in ay ka qeybgalaan shirka 29 ee midowga baarlamaanada carabta ( Arab IPU ) oo ka dhici doona 3-4 March 2019 magaalada Jordan kaa soo socon doon ilaa labo maalin.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya inta uu joogo wadankasi Urdun waxaa uu kulamo la qaadan doona madax kaladuwan oo ka qeybgalaysa shirkaasi.